हामी रोममा see दिनमा के देख्न सक्छौं? यात्रा समाचार
Susana Garcia | | शहरहरू, सामान्य, रोम
को शहर भ्रमण गर्नुहोस् तीन दिनमा रोम एकदमै विरलै छ, र हामीले एक हप्ताको एक घण्टा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्नेछ यदि हामी ती रुचिकार ठाउँहरू कभर गर्न चाहन्छौं जुन हो वा हो भनेर देख्न सकिन्छ। तपाईंसँग कुनै चीजको लागि विशेष भविष्यवाणी हुन सक्छ, तर सत्य यो हो कि शहरमा यति धेरै कुरा देख्न सकिन्छ कि हामी एक हप्ता पनि पाउँदैनौं।
धेरै सारांश हेर्न ठाउँहरू र आशा छ कि त्यहाँ लामो लाइनहरू छैनन् जसमा हामीले समय गुमाउँदछौं, त्यहाँ केहि धेरै स्थानहरू छन् जुन हामीले हाम्रो सूचीमा राख्नुपर्दछ। धेरै चीजहरू पुरानो शहरमा छन् र नजिकै, जुन एक बोनस हो, त्यसैले पहिलो दुई दिन रोमको बिचमा खर्च गर्न सकिन्छ। अन्तिममा भ्याटिकन जानु पर्छ, जहाँ त्यहाँ धेरै कुरा पनि छन्।
1 पहिलो दिन, आवश्यकहरू
2 दोस्रो दिन, हामी अझै रोममा छौं
3 तेस्रो दिन, भ्याटिकन
पहिलो दिन, आवश्यकहरू
तपाईं रोम शहर मा कुनै विवरण याद गर्न चाहानुहुदैन, तर सत्य यो हो कि त्यहाँ केही आवश्यकहरू छन्। रोमको प्रतीक कोलोसियम पहिलो स्टप हुन सक्छ। टिकटहरूको लागि प्राय: लाइनहरू हुन्छन्, यद्यपि मार्गनिर्देशन भ्रमणहरू व्यवस्थित गर्न सकिन्छ कोलोसियमलाई विस्तृत रूपमा हेर्नयद्यपि यी अधिक महँगो छन्। कोलोसियम नजिकै त्यहाँ धेरै चाखलाग्दो भ्रमणहरू छन्। एकातिर, त्यहाँ छ प्यालेटिन, पहाड जुन शहरको पालना मानिन्छ। यस पहाडमा हेर्न धेरै स्थानहरू छन्, जस्तै लिभियाको हाउस, अगस्टस हाउस अफ अगस्टस, ड्रोस फ्लाभिया, फरनीज बगैंचा, जुन युरोपको पहिलो वानस्पतिक बगैंचा हो, र प्यालाटिन म्यूजियम। कोलोसियम नजिकैको मार्ग अनुसरण गरेर हामी पनि कन्स्टान्टिनेको आर्चमा जान सक्छौं र त्यसपछि रोमन फोरमसहरमा पुरानो सार्वजनिक जीवनको ठाउँ र जसमध्ये आज त्यहाँ बाँकी रहेका केही चीजहरू छन् जुन हामीलाई कल्पना गर्न अनुमति दिन्छ कि यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कत्तिको रमाइलो हुनेछ।
अलि अलि टाढा छ Agrippa को Pantheon, तर यो अन्य आवश्यक चीज हो। यो भवन प्राचीन रोमको सबैभन्दा राम्रो संरक्षित हो, एक गोलाकार भवन जुन भित्रबाट अझ आश्चर्यचकित हुन्छ। यो याद गर्नुपर्दछ कि यही ठाउँमा चित्रकार राफेल गाडिएको छ। एक छोटो दूरी यो हेर्न संभव छ पियाजा नवोनाशहरको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण वर्गहरूको। यसमा तपाईंले यसको प्रसिद्ध तीनवटा झरनाहरू एक-एक गरेर देख्नुपर्नेछ, जसमध्ये बर्निनीको 'चार नदीको फोहोरा' बाहिर उभिएको छ। यससँग फियान्ते डेल मोरो र फुएन्टे डे नेप्चोनो पनि छन्, दुबै जियकोमो डल्ला पोर्टा द्वारा। हामी पहिलो दिनमा जानु हुँदैन ट्रेवी फाउंटेन, पियाजा नाभोनाबाट केहि टाढा पियाजा डि ट्रेवीमा अवस्थित छ। यो एक सुन्दर झरना हो, तर हामीले त्यस यात्राको कारण यो कथा पनि हो कि यदि तपाईंले फोहोरमा एउटा सिक्का खसाल्नुभयो भने तपाईं रोम फर्कनुहुनेछ।
दोस्रो दिन, हामी अझै रोममा छौं
दुई दिनमा हामी रोमको बारेमा अझ बढी जान्न सक्दछौं। को catacombs अधिक र अधिक प्रसिद्ध हुँदै गइरहेको छ र त्यहाँ धेरै यात्राहरू छन्। सान सेबास्टियन, सान क्यालिक्सो वा अन्यमा डोमिटिलाको। मूर्तिपूजकहरू र प्रथम इसाईहरूलाई आज गाडिएका ठाउँहरू भूमिगत रोम पत्ता लगाउनको लागि अनौंठो अनुभव भएको छ। यदि हामी हरियो ठाउँहरू मन पराउछौं भने, हेर्नै पर्छ Villa Borghese, सम्पूर्ण युरोपमा सब भन्दा सुन्दर र ठूलो शहरी पार्कहरू मध्ये एक। शहर मा हामी प्रसिद्ध को माध्यम बाट जान पर्छ सत्यको मुख, जसमा तिनीहरूले भन्छन् कि यदि तपाईंले हात राख्नु भयो र झुठो पार्नुभयो भने यसले तपाईंलाई समात्नेछ। चासोको अन्य बुँदा हुनेछ ट्राजनको बजार, विश्वको पहिलो इनडोर शपिंग सेन्टर मानिन्छ, र कराकल्लाको नुहाउने ठाउँशहरको पुरानो थर्मल सेन्टर
तेस्रो दिन, भ्याटिकन
El भ्याटिकन यूरोपको सबैभन्दा सानो देश हो र किनकि यो ऐतिहासिक केन्द्रको छेउमा छैन, एक खास दिनको लागि यात्रा छोड्नु राम्रो हुन्छ। यस शहर-राज्यमा हामी प्रसिद्ध सेन्ट पिटर्स स्क्वायर देख्न सक्छौं, बर्नीले निर्मित, जहाँ सेन्ट पिटरको बासिलिका अवस्थित छ। तपाईं यो बेसिलिका भित्रबाट हेर्न सक्नुहुनेछ, जहाँ ला मूर्ति माइकल एन्जेलोको Pieta। जब तपाईं डोममा जानुहुन्छ तपाईं वर्गको दर्शनीय दृश्यहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
भ्रमण यस मार्फत जारी छ भ्याटिकन संग्रहालयहरूयद्यपि यदि हाम्रो समय सीमित छ, हामी हेर्न चाहान्छौं मात्र हेर्नु राम्रो हुन्छ र बाँकीलाई अझ लामो यात्राको लागि छोड्नुहोस्, किनकि तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा हेर्न हामीलाई केही दिन लाग्नेछ। त्यहाँ हेर्न धेरै छ र तिनीहरू एक ठूलो आकर्षण हो। कार्टोग्राफिक नक्शाको ग्यालेरीबाट क्यान्डेलाब्राको ग्यालरी, प्यालेभन अफ फ्लोट्स, टेपस्ट्रीज ग्यालरी, पिनाकोटेका, इजिप्टियन म्यूजियम वा एट्रस्कन म्यूजियम अन्यमा। संक्षेप मा, यो सबै हेर्न असम्भव छ, त्यसैले हामी छनौट गर्न हुनेछ।
हामी रोम भ्रमण नगरी छोड्न सक्दैनौं सिस्टिन चैपल चैपलको छतमा माइकलएन्जेलोको ठूलो कामको साथ। अन्तिम न्याय र आदमको सिर्जनाको साथ फ्रेस्कहरू एक अवलोकन-अवलोकन गर्नै पर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » हामी रोममा see दिनमा के देख्न सक्छौं?
बर्लिन तीन दिनमा